QOSOL IYO QISOOYIN HORE QAYBTI 4AAD‏ W/Q XAREED SAALAX CADAAWE | raascasayrmedia.com
← Dawladda Itoobiya oo Xabsiga ka sii daysay xubno ka tiran Jabhadda ONLF ee dagaalka kula jirtay
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay ka qaybgalay furitaankii shirkii wadamada Siin-Saad →
July 22, 2010 · 7:52 pm
QOSOL IYO QISOOYIN HORE QAYBTI 4AAD‏ W/Q XAREED SAALAX CADAAWE
Soomaalidu waa ummad war-ku-nool ah, oo jecel in ay si joogto ah, meel ay joogtoba, u kala warqaadato. Ha noqdo war murtiyeed, mid iska caadi ah, mid faneed ama sheeko xariiro. “Maxaa la sheegay” “war iyo wacaal ma haysaa” “war baa ugu baahi badan” “ war la helyaaba talo la hel” “war jiraaba cakaaruu iman”: waa oraahyo caan ah, oo si guud, u muujinaya sida Soomaalida dhexdeeda kala war qaadashadu muhim ugu tahay.
Buuniyada isku hawla aqoonta bulshada waxay yiraahdaan iyagoo arrintan cilmiyeynaya: Soomaalidu waa mujtamac hadal ahaan wax isugu gudbiya (oral society), kuwaas oo aqoonta, waayo aragnimada, falsafadaha nolosha iyo xirfadahaba si xiriir ah ugu xanbaara tiraab ama tix, taas oo jiilba jiil gaarsiiyo.
Aduunyadu waa hadba heere, qaabka warku u kala gaarayo ummadan wuxuu soo maray marxalado kala gedisan. Mar baa socoto meeldheer ka timaada oo keliya ahayd isha warka laga helo oo qura. Marka xigana isgaarsiin taag daran oo ku eg dabaqad gaar ah ayaa degaanka soo gashay. Mar kale, warbaahiyayaal reer galbeedku samaysteen ayaa waxay noqdeen isha sadexaad ee dhegta loo dhigo. Waqti xaadirkan isgaarsiinta iyo warbaahintuba faraha ayay ka baxeen. Nin doona iyo nimaan dooninba, warku fadhiguu ugu imaanayaa!
Goor hore iyo haddaba, waxaa jira shakhsiyaad dhacdooyin qosol iyo xiiso leh abuura, si ay dadka dhaqdhaqaaq ugu sameeyaan. Warkaasna la isu la dhexqaado, oo miyi iyo magaalo si maad leh loogu sheekaysto.
Wadaadku waa shaqo doon
Waqti laga joogo in ka badan Nus-qarni ayaa magaalada Caluule waxaa soo martiyey nin socoto ah oo meel dheer ka yimi, oo shaqo doon ah. Magaalada Caluule waqtiyadaas iyo ka horba waxay ahayd meel caalamka kale xiriir ganacsi iyo bulsho oo heer sare ah la leh. Xiriirkaas waxaa laf-dhabar u ahaa gaadiidka badda iyo istiraatijiyada juquraafi ee magaaladu ku taal. Taas darteedna dad badan oo shaqo doon ah ayaa soo tammadin jiray.
Si kastaba ha ahaatee, immaatinkii ninkan waxaa dadka magaaladu ka fisheen inay xog iyo is-waraysi ka heli doonaan. Wuxuuse ahaa nin diifaysan oo shaqo iyo cid gacansiisa u dhararaya. Waa meel wax ka socdaane, waxaa dad ugu soo horeeyey nin Shactiroole ah. Warkaa la istaabsiiyey. Xariifkani garay inaan ninkan socotada ah dhegihiisu shaqo mooyee aysan wax kale maqli hayn.
Maxaad Xirfad Leedahay?
Haddii la is ka waraystay labadoodi xirfadaha uu ninkan xoogsi doonka ahi leeyahay iyo fursadaha shaqo ee meesha yaal, waxaa la isla meel dhigay inuu Mu’adin ka noqdo masaajid magaalada ku yaal.
Aadaan Salaadeed iyo Barqanimo
Ninki haddii uu ogolaaday inuu mu’adin noqdo, wuxuu saaxiibkiis u soo jeediyey inuu tijaabo galo. Xilli salaadeedba la is lama sugine, goor barqo ah ayaa masaajidka la tegay. Wadaadki inta uu Minbarka laga adimo fuulay ayuu labada dhegood faraha geliyey oo Aadaan salaadeed ku dhiftay. Shactiroolihina tartiib ayuu uga dhaqaaqay oo uga dhuuntay. Hal mar ayaa dadkii masaajidka u dhowaa jug soo yiraahdeen! … waa la yaabay! ‘oo tolow, mindhaa, ninkani meel salaadda iyo waqtiyadeeda laga yaqaan kama iman’? ayaa la is waydiiyey!
Ninki markii uu Aadaanki dhameeyey ayuu soo jeestay, oo hareero daymooday. Wuxuu arkay dadkii oo dhan oo isaga ku xoonsan. Saaxiibkiis ayuu ka dhex eegay. Markii uu arki waayay ayaa waxaa u cadaatay inuu kaarto u dhigay. … intuu hoos fiiriyey ayuu isla sii yaabay!
Waxa Dhacay Ma Maqasheen?
Warkii ayaa is gaaray. Beledka iyo baadiyahaba waxay noqotay dhacdo qosol leh oo ayaamo la wadwado. Ninkii khiyaamada sameeyey ayaa la waydiiyey sababta ku kaliftay? Markaas ayuu ku andacooday: inuu la yaabay sida magaaladi u warbeeshay, oo raggii oo derbiyada tuman u waayeen wax ay isu sheegaan; Arrintana uu is yiri ‘bal ayaamo ha lagu qax-weeyo’.
 Qof dadka ka qosliya
 Isu soo baxeen
Halkan ka akhriso qabtii 1aad
Halkan ka akhriso qabtii 2aad
Halkan ka akhriso qabtii 3aad